‘भ्रम पो रहेछ ।’ जिल्ल पर्दै कमल बोल्छ । यताउति हेर्छ, अरूले उसको स्वर सुनेको भए अवश्य उसलाई पागल भन्थे होलान् ।
कयौँ वर्षदेखि ऊ त्यहाँ काम गरिरहेको छ । त्यहाँ थुप्रै सहकर्मीहरू छन उसका । कोही उत्तिकै कर्तव्य परायण, उत्तिकै निष्ठावान्, कोही ठिक विपरीत अर्थात् कर्तव्यच्यूत र निष्ठाहीन । सङ्ख्या भने दोस्राहरूको नै बढी छ । साथै कर्तव्यच्यूत र निष्ठाहीनहरूको एउटा सङ्गठन छ ‘कनिस’ प्रसङ्ग अनुसार उनीहरूको सङ्गठनको राम्रो अर्थ पनि लाग्न सक्छ अर्थात् कर्तव्य परायण तथा निष्ठावानहरूको सङ्गठन ।
त्यहाँ त्यसकै बोलवाला छ अर्थात् त्यो गिरोहले भनेकै चल्छ । व्यवस्थापन पक्ष उनीहरूदेखि डराउँछ र ‘कनिस’ को निर्णय र चाहना पन्छाउन सक्तैन । यो उसको बाध्यता हो वा आत्मिक चाहना हो, खुट्याउन गाह्रो मात्र होइन , साह्रै गाह्रो छ ।
कार्यरत कर्मचारीहरूको वार्षिक मूल्याङ्कन गर्दै कर्तव्यपरायणहरूलाई पुरस्कार दिने परम्परा त्यहाँ वर्षौँदेखि छ ।
आफू कर्तव्यनिष्ठ भएकामा कमलालाई गर्व छ किनभने उसको कार्यको प्रतिफल उसले सोचे अनुसार वा लक्ष्य अनुसार नै हुँदै आएको छ र व्यवस्थापनले पनि उसको प्रशंसा गर्ने गरेको छ ।
पारितोषिक वितरणको दिन भव्य कार्यक्रमको आयोजना हुन्छ । कार्यालयका उसका सम्पूर्ण सहकर्मीहरू सो कार्यक्रममा उपस्थित हुन्छन् । पारितोषिक तिन जनालाई दिइने भएको हुन्छ । मूल्याङ्कन समितिको निर्णय सुनाइँदा आफ्नो नाम पनि पर्छ, अझ एक नम्बरमा पर्छ भनेर उ पक किसिमले विश्वस्त नै हुन्छ ।
ऊ उद्घोषकको मुखबाट आफ्नो नाम सुन्न आतुर हुन्छ । नभन्दै उद्घोषकले पुरस्कार पाउनेहरूको नाम भन्छन् “यो वर्ष कार्यालयको लक्ष्य अनुसार कर्तव्य निष्ठा तथा आआफ्ना जिम्मेवारी पुरा गर्ने उम्दा कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ विभीषण, हनुमान र कुम्भकर्ण ।”
(Image Source: Click Here )
'पारितोषिक' भनेको के हो ?
रमेश मोहन अधिकारी October 12, 2010 at 5:52 PM
'पारितोषिक'भनेको पुरस्कार हो ?
नेपाली भाषामा नेवारी भाषाको प्रभाव: सामान्य दृष्टि...